कम सुन्दरी छैनन् श्वेताकी जेठानी दिदी! सासुले दुवै बुहारीलाई मेरा रानीजस्ता भनेपछि दुवै मक्ख – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/कम सुन्दरी छैनन् श्वेताकी जेठानी दिदी! सासुले दुवै बुहारीलाई मेरा रानीजस्ता भनेपछि दुवै मक्ख
कम सुन्दरी छैनन् श्वेताकी जेठानी दिदी! सासुले दुवै बुहारीलाई मेरा रानीजस्ता भनेपछि दुवै मक्ख
नायिका स्वेता खड्का वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन् । सोमबार काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा धनगढीका विजयेन्द्र सिंह राउतसँग उनले विवाह गरेकी हुन् ।विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस अघि नै उनको विवाहको बारेमा समाचार सार्वजनिक भइसके पनि नायिका खड्काले भने बिहेको अघिल्लो दिन आइतबार नै आफ्नो विवाहको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् औपचारिक जानकारी दिएकी थिइन्।
बिहेको एक दिनअघि मेहेन्दी सेरेमोनीको क्रममा स्वेताले भावुक स्टाटस लेख्दै आफ्नो दोस्रो बिहेलाई समाजका केही व्यक्तिले स्विकार गर्लान् ? भन्ने प्रश्न पनि सोधेकी थिइन् । स्वेताले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्–‘मेहेन्दीको रंगहरुसँगै खुल्दै छु म । जीवनको नयाँ पानाहरुमा भुल्दै छु म।’
स्वेता नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग वि.सं २०७१ साल असार २३ गते विवाह गरेकी थिइन् । तर, करिब एक महिनापछि २०७१ साल साउन २५ गते उनको उपचारका क्रममा भारतमा निधन भएको थियो । स्वेताले ‘कहाँ भेटिएला’, ‘श्रीमान् श्रीमती’, ‘हासी देउ एक फेर’, ‘कोहिनूर’, ‘कान्छी’ जस्ता चलचित्रहरुमा अभिनय गरेकी छिन्।
बोल्ड र सुन्दरी दिलिप रायमाझीको छोरि (हेर्नुहोस १५ फोटो फिचर )